News - Isbedelka soo koraya ee warshadaha daabacaadda
Rajada horumarka ee warshadaha daabacaadda Shiinaha shanta sano ee soo socota waxay saadaalinaysaa isbeddelka xaaladda dhaqaale ee Shiinaha, hagaajinta qaabka warshadaha, hoos u dhaca faa iidada warshadaha daabacaadda, imisa dhirta daabacaadda iyo baakadaha u baahan inay xalliyaan dhibaatada ka soo boodka jahwareer. Iyo warshadaha daabacaadda mustaqbalka waxay noqon doontaa nooca jihada horumarka, muujineysa nooca isbeddelka horumarka, sidoo kale waxay noqoneysaa walaacyo badan oo xirfadeed.
Waxaa la sheegay in isbeddelka warshadaha uu yahay "hal isbeddel 5 sano gudahood". Fikradayda, isbeddelka horumarka ee shirkadaha waaweyn ee baakadaha iyo daabacaadda illaa iyo hadda wuxuu saadaalin karaa rajada suuqa ee jihada horumarka ee warshadaha daabacaadda iyo baakadaha Shiinaha ee 5-ta sano ee soo socota.
Isdhexgalka daabacaadda iyo dhirta baakadaha waa lama huraan
Warbixinta sahaminta xogta ugu dambeysay ee warbixinta: Qiimaha shirkadaha Shiinaha ayaa kor u kacaya, laakiin faa'iidada iibka suuqyada ayaa hoos ugu dhacday taariikhda ugu hooseysa.
Xaqiiq ahaan, warshadaha daabacaadu kama hor tagi karto xaalada guud waxayna ku dhacaysaa isla xaaladaas. Qiimaha raasumaalka dadku wuu sii kordhayaa, qiimaha kirada ee bakhaarada ama warshaduhu ma aha oo kaliya kor u kaca, laakiin faa'iidada baakadaha iyo daabacadu waxay ku jirtaa hoos u dhac xoog leh.
Sababtoo ah la'aanta faa'iidada tartanka, shirkadaha qaar waxay la dagaallamaan tartanka qiimaha si ay u ilaaliyaan badbaadada aasaasiga ah ee suuqa iibka. Shirkado badan oo daabacaadda daabacaadda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa xiraya dukaankooda oo ka baxa suuqa iibka iyada oo kor u kacaysa kharashka iyo hoos u dhaca macaashka.
Laakiin ka leexashada iyo dagaal adag midkoodna ma aha xalka ugu dambeeya. Iyadoo la cusbooneysiinayo lana beddelayo warshadaha wax soo saarka baakadaha iyo daabacaadda, waxaa jiri doona tiro aad u tiro badan oo isugu jira kuwo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah iyo warshad wax lagu shubo si ay ula kulmaan is-dhexgalka labada waddo.
Hagaajinta mashiinada iyo qalabku waxay noqdeen isbeddel lama huraan ah
Ka waran qiimaha kor u kaca ee raasumaalka aadanaha Haddii aadan rabin inaad gasho kharashyo badan oo shaqaale ah, waa inaad kordhisaa wax soo saarka.
Furaha ayaa ah in la wanaajiyo mashiinada shirkadda. Si toos ah kor loogu qaado mashiinnada iyo qalabka iyo teknolojiyadda, laguna beddelo raasammaalka aadanaha bini'aadamka ku habboon waa mustaqbalka.
Maxay uga raqiisan tahay maalgashiga mashiinada iyo qalabka farsamo ahaan marka loo fiiriyo xoogga?
Maaddaama Shiinuhu ku jiro hoos u dhac dhaqaale xilligan xaadirka ah, qiimaha suuqa ee mashiinnada iyo qalabku aad ayuu u hooseeyaa. Ku beddelashada shaqada mashiinnada iyo qalabka waa horumar muddo-gaaban ah ee qoondaynta hantida go'an. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah waxqabadka joogtada ah ee mashiinnada iyo qalabka, waxtarka sare ayaa lagu gaari doonaa.
Isla mar ahaantaana, xilliyada kala duwan ee suuqa wax lagu iibiyo waxay leeyihiin xeerar daabacaadda baakadaha kala duwan, warqad daabacan, isbeddel farsamo oo wax lagu beddelayo, hagaajinta mashiinnada iyo qalabku waxay la kulmi karaan suuqa iibka sida ugu dhakhsaha badan.
Ku dheji muhiimad weyn baakadaha macaamiisha iyo khibradda daabacaadda
Ma fahantay Ereyga "la habeeyay" wuxuu si qoto dheer ugu qotomaa quluubta macaamiisha, baakadaha la daabacay iyo daabacaadda ayaa aad ugu habboon shuruudaha macaamiisha maanta.
Horumarinta internetka iyo hagaajinta qawaaniinta bini-aadamka, tirada badan ee baakadaha iyo daabacaadda ayaa si tartiib tartiib ah loo yareeyay. Si loo muujiyo shakhsiyadda, macaamiil badan ayaa diyaar u ah inay qaabeeyaan alaabada ku habboon naftooda, halka ay ku jiraan dijitaalka weyn. baakadaha alaabada daabacaadda, arrinta daabacaaddu way ka duwanaan kartaa qofba qof, taas oo ka dhigaysa arrin kala duwanaansho iyo dadnimo.
Sidaa darteed, shirkaduhu waa inay ku dadaalaan sidii ay macaamiisha u siin lahaayeen adeegyo khibrad leh oo ku saleysan astaamahooda iyo baahiyaha dhabta ah.
Dhaqanka + daabacaadda baakadaha waaweyn ee dijitaalka ah waxay noqotaa jiho cusub
Natiijooyinka isbeddelka horumarka adduunka oo dhan waxay muujinayaan in xilligan, 85% shirkadaha daabacda baakadaha adeegga ganacsiga ee adduunka ay bixin karaan adeegyo waaweyn oo daabacaadda baako dijitaal ah, taas oo 31% ka mid ah shirkadaha daabacaadda adeegga ganacsiga baakadaha ay sheegeen in ka badan 25% Dakhliga ugu weyn ee ganacsiga laga helo daabacaadda baakadaha waaweyn ee dhijitaalka ah. Warbixintani waa mid "qaawan" si loogu wargaliyo qof walba in suuqa iibka ee xeerarka daabacaadda baakadaha ee waaweyn si joogto ah loo hagaajinayo
Guud ahaan, marxaladda hadda la joogo, daabacaadda baakadaha waaweyn ee dijitaalka ah ee Shiinaha oo keliya waxay u dhigantaa 1%, laakiin iyadoo la horumarinayo raadinta miyir-qabka shakhsi ahaaneed ee saxda ah iyo hagaajinta xeerarka ilaalinta deegaanka, wax soo saarka iyo wax soo saarka kharashyada shirkadaha daabacaadda dhaqameed. kor u kaca, sidaa darteedna daabacaadda baakadaha ee dhijitaalka ahi way ka soo fiicnaanaysaa teknolojiyadda maalinba maalinta ka dambaysa. Muddada soo socota, daabacaadda baakadaha waaweyn ee dijitaalka ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa tiro badan oo ah qaybaha daabacaadda ee kala duwan, shirkadaha daabacaadda baakadaha ayaa sidoo kale dooran doona tirada daabacaadda baakadaha dhaqameed si loo kordhiyo daabacaadda baakadaha dijitaalka ah, si loo buuxiyo shuruudaha beddelaya ee suuqa iibka.
Tiknoolajiyada internetka ha soo dhex gasho hawlgalka iyo maaraynta
Warshadaha elektaroonigga ah waxay faham fiican ka haystaan ​​tikniyoolajiyadda Internetka. Sanadihii la soo dhaafay, marka lagu daro dukaamada jirka ee offline, daabacaadda iyo warshadaha baakadaha ayaa sidoo kale ku tartamaya furitaanka dukaamada internetka oo ku saleysan e-commerce si loo ballaariyo aagga iibka suuqa. Marka la eego alaabta ceyriinka ah, dayactirka xiriirka macaamiisha iyo macaashka shirkadda, waxay si joogto ah ugu tiirsan yihiin xogta falanqaynta, si markaa isbeddello sax ah loogu sameeyo isbeddelada.
Aniga aragtidayda, isbedelkan horumarineed wuu kici doonaa oo ma yaraan doono shanta sano ee soo socota. Tiro aad u tiro badan oo ka mid ah warshadaha wax daabaca iyo baakadaha ayaa ku wareejin doona ganacsigooda daabacaadda khadka tooska ah. Dhanka kale, waxay adeegsan doonaan xog weyn si ay u falanqeeyaan xogta una horumariyaan una suuq geeyaan wax soo saarkooda iyaga oo la kaashanaya maskaxda netizens-ka.
Sidaa darteed, in lala wareego ilaha internetka lagana suurtageliyo kanaallada internetka waa tallaabo lagama maarmaan u ah shirkadaha baakadaha iyo daabacaadda si ay u raadsadaan jihada horumarka shanta sano ee soo socota.
Baakadaha balaastigga ah ee jilicsan, filimka aluminium ee badanaa la isticmaalo ayaa asal ahaan loo qaybiyaa laba qaybood, aluminiumka CPP, aluminiumka PET, laakiin saboolka aluminium ee isku dhafan ayaa fududaanaya in la arko ifafaalaha wareejinta aluminium, taas oo keenta khasaarooyin badan shirkado badan oo baako. , warqaddan, laga bilaabo barta galka, waxay soo bandhigtay xalal kala duwan si looga hortago wareejinta filimka aluminium.
1. Koollo polyurethane ah oo ka kooban laba qaybood
1) Koolo gaar ah oo loogu talagalay filimka aluminium aluminium ayaa la qaatay
Sii daynta xaraashka jilicsan ee liidata iyo koollada ayaa fududahay in la dhex geliyo lakabka aluminized, wuxuu saameeyaa soonka lakabka aluminized, isku dhafan haddii natiijadu xun tahay, hadhaaga dareeraha ayaa aad u weyn, ka dib marka la daaweeyo xoogga koollada ayaa hoos u dhacaya, xitaa wareejinta aluminized way dhacdaa, markaa waa in la doortaa miisaanka molikalikada ku habboon, sii deynta wanaagsan ee dareeraha, ayaa si isku mid ah u dahaaran filim aluminium ah oo xoog leh viscous ma aha dhejis gaar ah.
2) Qadarka saxda ah ee xabagta la mariyo
Qadarka xabagta waa weyn yahay, fududahay in la keeno saameynta qalajinta ma fiicna, sidaa darteed xabagta ayaa ku fideysa daahan aluminium, sidoo kale waxay dheereyneysaa waqtiga daaweynta, fududahay in la arko aluminium kala wareejinta ifafaale, sidaas darteed xaddiga xabagta waa in la xakameeyo booska ku habboon, sida ku cad khibradda guud ee xakamaynta 2 ~ 2.5g.
3) Yaraynta wakiilka daweynta
Hagaajinta jilicsanaanta lakabka dhejiska, laakiin sidoo kale si wax ku ool ah looga hortago wareejinta aluminium aluminium ah, oo badanaa loo isticmaalo si loo yareeyo qadarka wakiilka daweynta, xaaladdan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya baakadaha iftiinka iyo xoqidda shuruudaha xoogga ee alaabada, alaabada aluminium ee caag ah sida ugu macquulsan in aan loo isticmaalin habkan.
4) Hagaajinta heerkulka qalajinta iyo xawaaraha dabaysha ee wadada qalajinta
Nidaamka ka shaqeynta filimka aluminized, waa inuu si habboon u hagaajiyaa heerkulka qalajinta ee waddada qalajinta, tusaale ahaan, kordhi 5-10 digrii, oo la hubiyaa xawaaraha dabaysha ee 5 mitir / s kor ku xusan, samee dareeraha si aad u dhammaystiran u buuq, yaree dareeraha harta, marka lagu daro sidoo kale waxay isticmaali kartaa qadka sare ee saafiga ah, daboolka sare ee sare ayaa waliba kara.
5) Kordhi heerkulka daaweynta isla markaana soo gaabiyo waqtiga daaweynta
Waxyaabaha isku dhafan ee filimka aluminized ee habka daaweynta waa inay ahaadaan kuwo ku habboon si loo hagaajiyo heerkulka daaweynta, soo gaabiyo waqtiga daaweynta, sidaas darteed xabagta si loo yareeyo waxyeellada aluminiumka, si wax ku ool ah looga hortago wareejinta aluminiumka, heerkulka guud ee xakamaynta 50-60 digrii , waqti 24 saac gudahood ama wax la mid ah, iska ilaali inaad waqti dheer daaweyso.
6) Isticmaal tayo wanaagsan oo filim aluminium ah
Haddii qiimuhu saamaxayo, soo iibso filim aluminis tayo sare leh, sida kuwa lagu dahaadho salka.
2. Xabag biyo ku saleysan
1) Baakadaha waxsoosaarka miisaanka yar, sida cuntada laalaabka leh, baastada degdega ah iyo wax soosaarka kale, qalabka loo adeegsado dahaarka aluminiumka CPP, asal ahaan si loo xakameeyo qiimaha wax soosaarka, inta badan waxaa loo isticmaalaa hal xabbo oo ka kooban biyaha, inta lagu gudajiro wax soo saarka dad badan sano, ayaa ka soo baxay kaliya dhibaatada wareejinta khad, iyo wareejinta aluminized, waqti isku mid ah by imtixaanka dhabta ah, ka dib markii xoog diirka isku dhafan waxaa laga heli karaa gudahood 1 ON / in ka badan 15 mm, la kulmi kartaa heerka u ah noocyada wax soo saarka baakadaha.
2) Isticmaal xabagta biyaha ku saleysan si aad u soo saarto alaabooyin aluminized ah, rullaluistemadka aniline waxay isticmaashaa ilaa 200 oo xariiq, xaddiga xabagta waxaa lagu xakameeyaa 1.2 ~ 1.8 garaam, si loo hubiyo xaddiga isku midka ah ee dahaadhka, saamaynta qalajinta wanaagsan, taas oo aan kaliya hoos u dhigayn wax soo saarka Qiimaha illaa xad, laakiin sidoo kale si wax ku ool ah u xalliya dhibaatada hadhaaga dareeraha, si loo hubiyo wax soo saarka caadiga ah ee macaamiisha.Loo yaabi goor dambe haddii dheecaanka haraaga ah ee waxyeelada xad dhaafka ah leh. Isla mar ahaantaana alaabada khad cad oo buuxa, saamaynta ayaa si gaar ah ugu habboon .